जानीराखौं, ८ घण्टा भन्दा बढी सुते मृत्यु वा हृदयाघात ! - Sagarmatha TV
जानीराखौं, ८ घण्टा भन्दा बढी सुते मृत्यु वा हृदयाघात !
न्यूयोर्क । प्रौढ मान्छे रातमा ६ देखि ८ घण्टाको समय मात्रै सुत्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । सो समयभन्दा बढी सुतेमा मृत्यु नै हुन सक्ने वा कार्डियोभस्कुलर रोगको असर देखिने विश्वव्यापी रुपमा गरिएको अध्ययनपछि युरोपियन हार्ट जर्नलमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सात वटा क्षेत्रका विभिन्न २१ देशको तथ्यांकलाई हेर्दा ८ घण्टा भन्दा बढी सुत्ने मानिसहरुमा हृदयाघात वा मुटुले काम नगर्ने समश्या देखिएको जनाइएको छ । ४१ प्रतिशत सम्म त्यस्ता मानिसको मृत्यु नै भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्यययन टोलीले २१ देशका ३५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहका १ लाख १६ हजार ६ सय ३२ प्रौढ मानिसलाई आफ्नो सुत्ने बानीका बारेमा सोधेको जनाइएको छ ।
उनीहरुलाई करिब ७ वर्ष ८ महिना सम्म अनुगमनपनि गरिएको थियो । थोरै वा धेरै समय सुत्दा स्वास्थ्यमा समश्या आउने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । थोरै समय सुत्दापनि उच्च रक्तचाप,डायबिटिनज जस्ता समश्या देखिने बताइएको छ ।